Yini okufanele ugqoke i-cardigan elula
I-Cardigan ayiyona ize ebizwa ngokuthi ingxenye enkulu kunazozonke zezingubo zezingubo zabesifazane. Noma yiliphi i-fashionista, eliyifake ngokufanele ngokugqoka okuthile, lizobukeka lihle futhi lihlelekile cishe unyaka wonke. Ngakho-ke, isizathu sokuthi kungani kufanele abe khona kunoma iyiphi intombazane encane, kucacile. Le nkathi inikeze kakhulu ukukhetha phakathi kwamaqoqo amafashini emikhiqizo esaziwayo kakade. Kodwa ukuthi yini ozogqoka i-cardigan elula, azi kangako isigamu samakhosikazi.
A stylish, kulokho kanye cardigan enhle - hhayi whim evamile of fashion sezinkathi. Uyisibonakaliso nje somnandi omuhle kakhulu. I-universality, cishe, iyinhlangano enkulu, ehlanganisiwe kuyo. Ijacket elinjalo lizosiza, indlela yokuhlukanisa isithombe, nokufihla ukuhluleka okukhona kwalesi sibalo. Ukugqoka i-cardigan elula, kuhilela ukwazi yena ngokwakhe, ikhono lokucabanga lokho akwenzayo. Ukuqonda kwezimpahla ezinikezwe ngenkathi entsha kuzoba kubalulekile.
Iyini i-cardigan. I-Knitted, knitted, i-cardigan ekhanyayo enezinkinobho ezihlukene yilokho okushiwo yilo nto. Izici ezibonakalayo - hhayi i-V encane encane, nokuntuleka kwekholomu, nesilwane esihlanganisiwe, kanye nokuba khona kwamapokhezi kuzo. Ungazidideli ngokushesha nge-jumper. Umele imodeli ye-cardigan, kodwa ngaphandle kwezinkinobho. Ekuqaleni, lolu hlobo lwezigqoko zokugqoka lwalubekwe ekhabetheni lamadoda ngenxa yokuntuleka kwekholomu kulo. Amasosha aseNgisi ayifaka efomu. Ukuthandwa kwakhe kubangelwa isihloko se-wardrobe - i-cardigan, ehambisana ngqo neCoco Chanel. U-Koko naye wadala enye yezitayela zokuqala ze-cardigan, ene-silhouette yamahhala, kokubili enezingalo ezibanzi futhi hhayi amaphakethe amancane. Izinto zanamuhla, njengezinhliziyo zomzimba, zibizwa kabanzi ngamaqoqo ezinkampani eziningi ezithandwayo, futhi ngamunye wabo uzama ukunikeza indima ebalulekile kumamodeli alula, kodwa ngokuthile okusha futhi okungavamile.
I-Cardigan 2012 . Ukugqoka i-cardigan ngaphandle kokwazi izindlela ezintsha zakamuva ezibucayi kunzima. Eziningi zezinhlobonhlobo ezihlukahlukene, zombili izitayela nezikhombisi-ndlela zinikezwe ithrekhi ekwindla-ebusika ngesizini sika-2011-2012. Abaqambi basikisela ukuthi bangaboni izinkinobho kubo, futhi lokhu kwaba yisici esiyinhloko. Amamodeli angafanelekiyo endabeni yemvelo ngokubambisana nebhande elincanyana - isiqondiso esiqondile sebusika elizayo. Amagqokwane anamakhanda anezinhliziyo angabhekisela kwezinye izitayela, kodwa azobe ethandwa kakhulu nge-viscous eningi. Yiphakamise ukugqoka izingubo ezilula. Ukwengeza isithombe kangcono ngezesekeli zemfashini. Abashicileli abaningi bahlobisa izitayela zabo ngezici ezithile zokuhlobisa, kanye nokusikeka okungajwayelekile, kanye nezindwangu ezihlukahlukene, ezingabonisa isiqondiso sabo sefashini.
Ubude babo bungaba buhlukile: kokubili okuncishisiwe okukhethwa kukho, kanye nezinhliziyo, "ukuphumula phansi," okufana nokubukeka kwengubo. Ubude be-sleeve abuyona eyingqayizivele. Phuma isikhathi esifushane, eside, noma ezintathu. Izintandokazi ngabanye zifuna ukukhetha, kanye nenhloso yalo. Ngokuqondene nombala, intombi eluhlaza okwesibhakabhaka, khona-ke ophuzi nge-turquoise, futhi futhi ama-milky nama-cherry hues abe yiziqhwa zasebusika. Ungabhala futhi imibala ye-classical - shades of black, white and gray.
Yini okufanele ugqoke? I-Cardigan ingagqoka noma yini, noma ngasiphi isikhathi. Into ekhona yonke, ngokuqhathaniswa nayo, kunzima ukuthola. Ngosizo lwakhe, izingubo ezitholakalayo zizothatha kokubili ukubukeka okubuyiselwe emuva nokuzolile. Ngakho-ke yonke indawo yenza zonke izinhlobo zobunjwa ngezakhiwo, imiklamo, ukuthi ingagqoke ngaphandle kokuvimbela, hhayi kuphela ehlobo, kodwa nasebusika. Kudingekile kuphela ukuguqula ukukhanya ku-cardigan efudumele. Khona-ke amakhaza angeke akuthumise.
1. Cishe cishe i-cardigan yansuku zonke ingagqoke futhi isitayela samahhala, kungaba nge-T-shirt, noma i-T-shirt, futhi futhi nge-shorts ngisho ne-jeans. I-cardigan ekhanyayo, efakwe phezulu kweTekhthi elikhanyayo, noma ngokuphambene nalokho, ukuhlanganisa ihembe elimnyama ngengubo eboshwe, kodwa umthunzi ongathathi hlangothi, kuyoba yinto efanayo. Ngokwefantasy, esimweni esinjalo, isikhala esihle sivuleka.
2. Esigqokeni, kokubili entwasahlobo nasehlobo, i-blouse enjalo izothatha indawo enhle yokwengeza. I sweatshi, kokubili omnyama nomhlophe, isibonelo, ayihambisani kabi nokugqoka ngemikhono emide, noma i-sarafan. Bobabili i-cardigan enesisindo futhi esicindezelekile iyohlinzeka intombazane efudumele endaweni epholile.
3. Imfashini engekho i-cotton encane, noma i-flax ingathathwa esigabeni se-beachwear. Thatha ijaji, okubaluleke kakhulu, ngethoni ku-swimsuit etholakalayo. Kokubili ubude be-cardigan nobude bomkhono awukwazi ukwenza umehluko, ubude obukhulu.
4. I-Cardigan ene-viscous - i-ejenti ehlukile kakhulu. Bobabili ukusebenza futhi ehhovisi akukubi nakancane. Imibala e-Emerald-green, isibonelo, i-cardigan ifanelana kahle ngokungabi namabhulukwe alula, kodwa akusiyo i-blouse emnyama. Ibhande elithakazelisayo, elitholakala kulesi sigqoko, lizosiqinisa kahle isithombe sonke. Kuyinto ngokwayo, nakuba ikhona yonke indawo. Ibhande elibanzi lomthunzi ofanayo nesigqoke, noma ibhande elimbethe elimhlophe lemibala ehluke kakhulu lizofanela ngokuphelele nesithombe esiyingqayizivele ..
5. Hlanganisa ijaji elifanayo elibili phezulu naphansi komthunzi ofanayo, kuvunyelwe ngokuphelele. Ungagqoka, isibonelo, ndawonye ijajethi nehembe lemilayezo efanayo kanye nokukhanya, nomkhonto omnyama, ukudala umfanekiso ozolile. Inhlanganisela yombala izosiza ukudala isithombe esihle kakhulu somkhonto wepensela, okungeyona embi kokuphila kwehhovisi.
6. Akuyona isitayela esifushane sokubopha okuqinile, kungenzeka ukuthi kungcono ukugqoka kanye nehembe, kodwa nge-leggings. Ama-cardigans asebekhulile abunzima, kodwa ukuvuthwa okukhulu kuzofudumala kahle ngesikhathi sezulu ebusika. Izesekeli zefashini, ezifana namabhande amakhulu, noma izikhwama zetekisi zingathathwa ngaphezu kwazo.
7. Esimo sezulu esifudumele, abantu abahlala bebandayo, abakwa-stylists bayeluleka ukuthatha i-cardigan ngemibala yakudala. Futhi zihlanganisa ezimhlophe ezimnyama, noma eziluhlaza okwesibhakabhaka, isibonelo, umbala wombala omnene, onemfashini. Kuyamukeleka nokugqoka i-turtleneck, kokubili ngemikhono emide nemikhono emifushane. Ubucwebe obucwebezayo, noma i-jeans ehamba phambili engasetshenzisiwe ngeke ihambisane nesithombe.
Njengoba ukhethe i-cardigan efanelekile, ungayihlehlisi kamuva. Masinyane ucabange ngomsebenzi omuhle kuwo. Ungamniki uthuli ekhoneni lakho lokulala. Kuye uyoba mnandi kunoma iyiphi indawo nakweyiphi inkampani.
Indlela yokugqoka owesifazane iminyaka engu-40: Izithombe ze-TOP-3 zesitayela eminyakeni yobuhle
Izingubo ezingu-9 ezenzelwe imfashini yonyaka ekwindla-ebusika 2015-2016
Izambatho zangaphansi kwe-thermal: imisebenzi, imithetho yokukhetha nokunakekelwa
Indlela yokukhetha ukuguqulwa okugcwele abesifazane: amathiphu nokubuyekezwa kwamamodeli wamanje
I-Salad Recipes for Loss Weight Loss
Indlela yokufundisa ingane ukucela imbiza
Izibonelo zezicathulo zabesifazane
Izindlela ezingcono kakhulu zokwehlukanisa ucansi ngomlomo
I-Beef Stroganoff ku-Multivariate
Indlela yokugcina ubuhlobo obufudumele nomyeni wakhe?
Ikhabethe lomfazi wesifazane